पासपोर्ट को बारे मा दिलचस्प तथ्य
२०७५ माघ २९ मंगलबार १४:०९:०० प्रकाशित
एक देशको सरकार द्वारा प्रकाशित, पासपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको अवधिमा यसको धारकको पहिचान र राष्ट्रीयता प्रमाणित गर्दछ। यो एक महत्वपूर्ण यात्रा कागजात हो जुन धारकको नाम, स्थान र जन्म मिति, फोटो, हस्ताक्षर, र अन्य पहिचान जानकारी जस्ता जानकारी समावेश गर्दछ।
तर, यी पासपोर्टले वर्षहरु मा विकसित गरेको छ। यहाँ यसको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू छन्:
1. इङ्गल्याण्डको राजा हेनरिक वी पहिलो थियो कि यो मुद्दालाई कुन कुराले पहिलो साँचो पासपोर्टलाई विदेशी भूमिमा पहिचानको प्रमाणबारे विचार गरिरहेको छ।
2. ब्रिटेनमा पासपोर्टहरू महिमाको रानीको नाममा जारी गरिएको छ। यसैले रानीले पासपोर्ट लिने आवश्यकता छैन। तथापि, शाही परिवारका बाँकी सदस्यहरू पासपोर्ट छन्।
3. एक भर्खरै अध्ययनले बताएको छ कि जर्मनहरू विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट छन्। हेनली र पार्टनर वीजा प्रतिबन्ध सूचकांकको 12 औं वार्षिक संस्करणअनुसार, जर्मन पासपोर्टले संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा राखेको छ, 176 मुलुकहरूमा भिसा रहित पहुँचको घमण्ड - सबैभन्दा बढी राष्ट्रीयता।
जबकि, सीरिया, पाकिस्तान, इराक र अफगानिस्तानको सूचीमा तल बस्न, 30 भन्दा कम देशहरूमा भिसा-रहित पहुँच संग।
4. युरोपियन युनियन भित्रका देशहरूका लागि पासपोर्ट किताबहरू बर्गाङ-रंगको आवरणमा छन् (क्रोएशिया बाहेक)।
अधिकांश मुस्लिम बहुमत देशहरुमा मोरक्को, पाकिस्तान र सऊदी अरब सहित हरियो रंग को आवरण छ।
5. सुरुमा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी गरिएको पासपोर्टको नियम सख्तै थिएन, जस्तै तिनीहरू आजकल छन्। सम्पूर्ण परिवारका फोटोहरू एक व्यक्तिको तस्वीरको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कथित रूपमा, 1915 मा सर आर्थर कन्न डोयल आफ्नो आईवाफ र उनका दुई छोराहरूसँग पासपोर्ट फोटोको साथ उभियो।